Home » Think Different » ထားခဲ့ပြီ (လူ)
မဟုတ်ရင် တစ်ဖက်ပိတ်တို့၊ မျက်ကန်းတို့၊ ထမိန်ခြုံတို့၊ သူရဲကောင်းကိုးကွယ် တို့၊ မွတ်မတို့ ဆိုပြီး စတစ်ကာ လာကပ်ပေးနေဦးမယ်။
မတရားမှု ကို ဖယ်နိုင်တဲ့ စနစ် က ကြိုးဆွဲနိုင်အောင် ပြောင်းကြပါစို့
ပါတီပဲကြည့်ပြီးမဲပေးခိုင်းတာက.. ကန်င်ပိန်းစကားပဲ…။ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး စကားပဲ..။
လူထုနဲ့တိုင်းပြည်… မသက်သာဘူးသာ မှတ်ပေတော့…လို့..။
မဟန ထိပ်တန်းဘုန်းကြီးတွေ ဆိုတာကလဲ မတရားမှန်းသိသိနဲ့ ဝင်မပြောရဲလို့ ပါးစပ်ပိတ် နေရ တဲ့ ပညာရှင် လူတန်းစား တွေ လိုပါ။
သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေး.. Saffron Revolution တုန်းကလည်း မဟနထိပ်တန်းဘုန်းကြီး ကြခတ်ဝိုင်းဆတော်က.. ဓါးနဲ့ခုတ်..လက်သီးနဲ့ထိုးပြောပြီး.. စစ်အစိုးရကို.. မီးစိမ်းပြပေးသဗျ…။
သေချာပြီဆိုတော့.. မီးစိမ်းပြလိုက်တာမို့.. ရွေးကောက်ပွဲ.. ဒီနှစ်.. ပြောတဲ့အတိုင်းသေချာပေါက်ဖြစ်မယ်လို့.. ။
အမေရိကားလိုနိုင်ငံမှာ.. ပီနန်ဆရာတော်လို.. လစ်ဘရယ်ဆရာတော်တွေ.. ပါဝါတော်တော်ကြီးကြတာတောင်.. ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးဖေါက်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တာပဲ…။
စနစ်မကောင်းရဲ့အောက်မှ လူကောင်းတစ်ရာ မရှိနိုင်ပေမယ့် လူကောင်းတစ်ယောက်က စနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်ရင် စနစ်ကောင်းအောက်မှာ လူကောင်းတစ်ရာလောက်တော့ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ
ပို့စ်မှား မန့်မိ လို့ နေရာရွှေ့လိုက်တယ်။ :-))
သီလ ကောင်းသူ ထမိန်ခြုံရတာလည်း
ဘုရားသခင်နိုင်ငံ ရေး ဆိုတာကို နဲနဲ စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်။
ဘုရားသခင်နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ငုတ်တုတ်ထိုင် ဘာမှမလုပ် မဲတောင်မပေးဘဲ နိုင်ငံကောင်းလာမလား မျှော်နေသူ တွေ အတွက် မှန်ကန်သော စကားပါဘဲ။
သူယုံကြည်ရာ သူအမည်တပ်တာဆိုတော့ သူမမှား ပါဘူး ဇီကလေး ရယ်။
အရီး တို့ မှာသာ ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ် တစ်ခု နဲ့ မတရားမှု ပပျောက်ရေး အတွက် စည်းရုံးရေး စစ်မျက်နှာတွေ ဖွင့်နေလိုက်ရတာ။
အစ်မအေး – တစ်ချို့ က ရိ သေး။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် မဲစာရင်းသွားကြည့်ကြဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်သာမက ကိုယ့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ မဲစာရင်းသွားကြည့်ပေးဖို့၊ ဒီလိုသမိုင်းဝင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ပါဝင်ကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး၏ အထူးသံတမန် ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Ms Angelina Jolie Pitt ကလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
In democracy … every vote matters.
Thanks. She is so sweet. :-))
ပြောပြန်ရင်လဲ ပြောတယ် ဖြစ်ဦးတော့မယ်။
.အပီပဲ သဂျီး။ ပုံကို ပြောတာ။ ပုံတစ်ပုံက စကားတွေအများကြီးပြောသွား။
.ပြုံးရေ မှတ်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျတော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဗလီ ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ် အဲ့နားဝန်းကျင်ကလည်း မွတ်စ်တွေများပါတယ်။ ပြောချင်တာက အရင်တစ်ခေါက် နာဂစ်တုန်းက မဲပေးတုန်းက ဗလီကို ထပ်မြင့်ဖို့ ထပ်ချဲ့ဖို့ အခွင့်ကျအောင်လုပ်ပေးမယ် မဲငါးရာပေးရမယ်ဆိုပီး ကြံ့ဖွတ်က မွတ်စ်တွေရဲ့ မဲကိုယူသွားတယ်။
ဘာသာရေးဆိုတာ တအူးခြင် လွတ်မြောက်မှု သက်သက်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်ဘဲ အများအတွက်ဆိုပီး တွန်းလှုပ်တော့ ခက်ကုန်တာ။ ဘယ်ဘာသာ ကြည့်ကြည့် ဒီသဘောဘဲ။။ ဝတ်ရုံကြီးတွေခြုံပီး ထင်ရာစွတ်ကြိတ်တာများတယ်။ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အဲလို ထင်ရာပြောပေမှည့် သူ့အလှုပ်သူလှုပ် ကိုယ့်အလှုပ်ကိုယ်လှုပ် လူမှန်နေလျှာမှန် ရှိတော့ မထောင်းတာဘူး။ မြန်တျန့်ပြည်မှာဒေါ့ ဘာသာရေးက တိုင်းပြည်ကို ဆွဲခြနေပြီ။ ခြကွ ခြခြ….